Eyona Amazon ibonelela ngalo mhla (31-01-2018) | Iindaba zeGajethi
Eyona Amazon ibalaseleyo yanamhlanje (31-01-2018)
Siyaqhubeka nokunikezelwa yiAmazon veki nganye, izibonelelo ezithile ezinqunyelwe ngexesha, okanye ezinqunyelwe kwiiyunithi ezimbalwa. Kule nqaku siza kukubonisa olona lubonelelo lubalaseleyo onalo ngoku, okoko uthengayo ngaphambi kwentsimbi ye-12 namhlanje, kuba iyakuba lapho isiphelo siphela.
Ukuza kuthi ga namhlanje, siza kufumana esweni i-intshi engama-29 egobile evela kwi-LG nge-379 nje yee-euro, i-smartphone evela kwinkampani yaseFrance iAlcatel ye-79 euros, ikhamera yemoto evela kwinkampani i-Yi (Xiaomi) nge-euro ezingama-29 kuphela. kunye nezinye izibonelelo ngaphezulu komdla onokufumana ngezantsi.
1 29 intshi egobile LED Monitor
2 Iselfowuni ye-5 intshi ye-smartphone
3 Ikhamera yemoto eyi-compact
4 Umamkeli we-iPhone Qi
29 intshi egobile LED Monitor
I-LG isinika imodeli ye-29UC88-B, esweni i-intshi engama-29 egobile ngesisombululo esigcweleyo se-HD 2.560 x 1.080 enomlinganiso we-21: 9, iyifomathi efanelekileyo yokusebenzisa imovie, kodwa ikwaze isebenze ezimbini okanye Usetyenziso olungakumbi oluvulekileyo kwiscreen, enkosi kububanzi obunikezelayo. Eli liliso linokuhlengahlengiswa kokubini kubude nokuphakama, nokuba yenye yezinto ezimbalwa esinokuzifumana kwezi mpawu kwintengiso. Ixabiso laso eliqhelekileyo ngama-415 euros, kodwa kangangexesha elincinci sinokuyifumana kuphela nge-379 euro.
Thenga i-LG engama-intshi engama-29 egobile
Iselfowuni ye-5 intshi ye-smartphone
Inkampani yaseFrance iAlcatel isinika imodeli ye-U5, i-smartphone ene-5-intshi yesikrini esine iinkcukacha ezisisiseko ilungele i-WhatsApp, i-Facebook kunye nenye into encinci. Ngekhamera engasemva eyi-8, i-16 GB yokugcinwa kwangaphakathi kunye ne-1 GB ye-RAM, sinokuyifumana le fowuni isezantsi ye-Android ngee-euro ezingama-79 kuphela, xa ixabiso laso eliqhelekileyo ngama-89 euros.
Ikhamera yemoto eyi-compact
Ngekhamera yemoto eyi-Yi, sinokurekhoda iividiyo kumgangatho we-1080 kwii-fps ezingama-30 nge-engile yokubukela engama-130 degrees ukongeza ekubeni sikwazi ukonwabela wonke umxholo esiwurekhodayo kwiscreen se-2,7-intshi ye-LCD. Iilensi zisinika ukuvulwa kwe-f / 2,0 esivumela ukuba sirekhode ekukhanyeni okuphantsi. Ukongeza, enkosi kunxibelelwano lwe-WiFi, sinokufikelela ngokuthe ngqo kwisixhobo ngqo kwi-smartphone yethu. Ixabiso lokunikezelwa kwekhamera yemoto ye-Yi ngama-29,99 euros, I-euro ezingama-10 zitshiphu kunexabiso lazo eliqhelekileyo, elingama-euro angama-39,99.
Umamkeli we-iPhone Qi
I-iPhone entsha ye-2017, ifikelele kwintengiso yokutshaja ngaphandle kwamacingo okulindelweyo okusivumela ukuba sihlawulise isixhobo ngokubeka ngaphezulu kwesiseko sokutshaja seQi. Ukuba okwangoku awucwangcisi ukuvuselela isixhobo sakho, kodwa ungathanda ukonwabela lo msebenzi, enkosi kwiReceiver ye-iPhone Qi, sinokongeza inkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-iPhone yethu, okoko nje sisebenzisa isiciko, ngoyena ukhathalela ukubamba i-foil ebhityileyo edibanisa kwizibuko lombane ukongeza oku kusebenza. Ixabiso laso eliqhelekileyo li-9,99 euro, kodwa kude kube phakathi kobusuku siya kuba nakho yithenge nge-euro ezingama-7,99 kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Eyona Amazon ibalaseleyo yanamhlanje (31-01-2018)
I-2017 ibingunyaka olungileyo wokuhlawula ngaphandle konxibelelwano eSpain: iipesenti ezingama-45 zabasebenzisi